» मकवानपुरको चार स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा सुरु, के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइदैन ?
मकवानपुरको चार स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा सुरु, के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइदैन ?
२० बैशाख २०७८, सोमबार ०७:४९
हेटौंडा । मकवानपुरका चार वटा स्थानीय तहमा आजबाट स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जिल्ला सुरक्षा समिति मकवानपुरले निषेधाज्ञा लगाएको हो । कोरोना संक्रमणदर दिनहुँ बढ्दै गएपछी आजबाट निषेधाज्ञा लगाइएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत मणी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
आजबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा मकवानपुरको हेटौंडा, मनहरी, भीमफेदी र थाहा नगरपालिकाका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा गरिएको हो । मनहरी गाउँपालिकाको भने राजमार्ग क्षेत्रबाट दायाँ बायाँ ५ सय मिटर वरपर सम्म निषेधाज्ञा गरिएको हो । निषेधाज्ञा यही बैशाख ३१ गते राती १२ बजे सम्म लगाइएको उहाँले वताउनुभयो ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद् ) को निर्देशनलाई आधार मानेर जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, मकवानपुरको सिफारिस र जिल्ला सुरक्षा समितिको मिति निर्णय समेतको आधारमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम बैशाख १९ गते रातिदेखि १२ बजेदेखि बैशाख ३१ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा गरिएको हो ।
विकास निर्माण कार्यमा चाहिने मजदुर र सामग्री ढुवानीका साधनको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा पास लिएर चलाउनु पाइने छ । खाद्य सामग्री पसल, बिहान ५ बजे देखि ९ बजेसम्म चल्न पाइने छ तर तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । ।
९सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था बीमा र सहकारीलगायत राष्ट्र बैँकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा कार्यालयले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाइने छ । पत्रकारको हकमा सूचना विभाग, पत्रकार महासङ्घ र स्वयं सञ्चार संस्थाले जारी गरेको प्रेस परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाइने भएको छ ।
सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकूद, पुस्तकालय, सङ्ग्र्रहालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न पाइदैन । विवाह व्रतबन्धको हकमा बढीमा १५ जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । विवाहमा जाँदा ब्यानरसहित दुई वटा मात्रै गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने छ । विवाहमा जाँदा जिल्ला वा अन्तर जिल्लाका लागि पास नचाहिने तर पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्दा भने अनिवार्य पास चाहिने छ । अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधन प्रवेश पाउने छैन ।
यस्तो छ मकवानपुर प्रशासनको निर्णय ।